"Ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita" - Heb. 11:1.
Tsy maintsy misy fampiasana finoana eo amin'ny fanatonana an'i Kristy. Ilaintsika ny mitondra Azy eo amin'ny fiainantsika andavanandro; ary dia hanana fiadanana sy fifaliana isika ka ho fantatsika amin'ny alalan'ny fanandramana ny hevitry ny teniny: "Raha mitandrina ny didiko hianareo, dia hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka ny nitandremako ny didin'ny Raiko sy ny itoerako amin'ny fitiavany" - Jao. 15:10. Tsy maintsy mitaky ny teny fikasana ny finoana, mba hitoerantsika ao amin'ny fitiavan'i Kristy. Hoy i Jesôsy: "Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo, mba ho ao aminareo ny fifaliako, ka ho tanteraka ny fifalianareo" - and. 11.
Miasa amin'ny alalan'ny fitiavana ny finoana ary manadio ny fanahy. Afaka miditra ao am-po amin'ny alalan'ny finoana ny Fanahy Masina, ary mamorona fahamasinana ao anatiny. Tsy afaka ny ho tonga mpiasa hanao ny asan'i Kristy ny olombelona raha tsy miray amin' Andriamanitra amin' ny alalan'ny Fanahy Masina. Amin'ny alalan'ny fiovan-toetra irery izany no ahafahantsika miditra ny lanitra; tsy maintsy manana ny fahamarinan'i Kristy isika ho fanomezan-dalana ho antsika raha tiantsika ny hanatona ny Ray. Tsy maintsy tonga mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra isika, rehefa afa-nandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Tsy maintsy voaova isan'andro amin'ny herin'ny Fanahy Masina isika; satria asan'ny Fanahy Masina ny mampisandratra ny zavatra tiana, sy manamasina ny fo, ary mahamendrika ny maha-olombelona iray manontolo, amin'ny fanehoana amin'ny fanahy ny hatsarana tsy manam-paharoa ananan'i Jesôsy.
Tokony hibanjina an'i Kristy isika, ary amin'ny fibanjinana dia hanjary voaova. Tsy maintsy manatona Azy tahaka ny loharano tsy mety ritra isika, izay ahazoantsika misotro hatrany sy mahazo hery vaovao mandrakariva. Tokony hamaly ny fitaoman'ny fitiavany isika, hivoky amin'ilay Mofon'aina izay nidina avy any an-danitra, hisotro amin'ilay Ranon'aina izay mikoriana avy eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Tokony hitraka mandrakariva isika, mba hampiraisan'ny finoana antsika amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Aza mijery ambany toy ireny hoe mifamatotra amin'ny tany ireny ianao. Aza mijanona mandinika ny finoanao, manongotra izany toy ny hoe voninkazo, mba hahitanao raha misy fakany izany. Mitombo amin'ny fomba tsy re tsaika ny finoana. — BE, 15 Feb. 1893.